सलमान खानमाथि कसले लगायो जालसाजीको आरोप ? भने– कसैसँग बेइमानी गरेको छैन – ramechhapkhabar.com
सलमान खानमाथि कसले लगायो जालसाजीको आरोप ? भने– कसैसँग बेइमानी गरेको छैन
एजेन्सी, २६ असार ।
बलिउड सुपरस्टार सलमान खानमाथि जालसाजीको आरोप लागेको छ। सलमान, उनकी बहिनी अलवीरा खान, कम्पनी विइङ ह्युमनलगायत अन्य ६ सहयोगीमाथि जालसाजीको आरोप लागेको हो।
भारतीय व्यापारी अरुण गुप्ताले ‘विइङ ह्युमन ज्वेलरी’ खोल्न लगाएर सहमति गरेअनुसार कुनै सहयोग नगरेको आरोप सलमान र उनका सहयोगीमाथि लगाएका हुन्। आपूmहरुमाथि आरोप लागेपछि सलमानले आरोप लगाएकासँग आफ्नो कुनै लेनदेन नभएको र कसैसँग बेइमानी नगरेको बताए।
बलिउडबाट हलिउडतिर लम्किँदै आलिया भट्ट
बलिउड अभिनेत्री आलिया भट्ट हलिउड फिल्ड उद्योगमा प्रवेश गर्ने तयारीमा रहेकी छिन् । बलिउडमा पछिल्लो समयकी निकै व्यस्त नायिका आलियालाई चाँडै नै हलिउडमा पनि देख्न सकिने भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।
समाचारअनुसार आलियाले हलिउड एजेन्सी कम्पनी डब्लुएमईसँग सम्झौता गरिसकेकी छिन् । आलिया आफैले आफू हलिउडको हिस्सा हुन लागेको खुसी आफ्ना फ्यानसँग साटेकी छिन् । उनले इस्टागा्राममा डब्लुएमईसँग सम्झौता भएको बताएकी छिन् । यससँगै उनले समर्थकबाट बधाइ पाइरहेकी छिन् ।